Alfonsina Storni, chiratidzo cheArgentina postmodernism. 3 poems | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo we Iwo akazvimirira.
Alfonsina Storni aive nyanduri Ajendina akazvarwa muswitzerland ndiani akashaya zvinosuwisa pazuva rakadai nhasi ya1938. Inoonekwa seimwe yeiyo mifananidzo yezvinyorwa zvekare munyika yako. Basa rake rine kurwa, hushingi, rudo nekusimbisa kwevakadzi. Izvi ndizvo 3 yenhetembo dzake Ini ndinosarudza kuzvirangarira kana kuzvipa kune avo vaisazviziva.
2 3 nhetembo
2.2 Kutapira kwako
Akazvarwa mukati Switzerland, munguva pfupi akatama nemhuri yake kuenda kuArgentina. Hwake hudiki hwaizivikanwa ne kuoma kwehupfumi uye nekukurumidza paakagona akaenda kunoshanda se hweta, musoni uye mushandi. Yakanga iri zvakare mudzidzisi kumaruwa uye drama mudzidzisi uye vakabatsirana nemapoka akasiyana evechidiki.
Muna 1911 akatamira kuBuenos Aires uye gore rakatevera aive nemwanakomana, Alejandro, uyo baba vake vaisazivikanwa. Basa rake rekunyora rakatanga muna 1916 na Iko kusagadzikana kwerosebush, ndokuenderera mberi Zvinotapira zvinorwadza, Irremediably y Languor, izvo zvakamutungamira kuhwina Mubairo wekutanga weMasipareti wenhetembo uye wechipiri Mubayiro weNyika weMabhuku.
Gare gare basa rake Ocher akaiparadzanisa kubva kuChizvino-zvino nekuda kweiri rechokwadi zvirimo. Zvadaro zvakabudiswa Nhetembo Dzerudo, peya ye anotamba Chemhondoro Kuda nyika y Mbiri pyrotechnic farces. Uye akaenderera nhetembo mukati Nyika yematsime manomwe o Nhetembo anthology.
Kutambudzwa nekenza uye kukanganiswa nekusurukirwa kwakadzika, akazviuraya kuMar del Plata in 1938.
Zvinhu zvinofa hazvidzoke kuupenyu
zvinhu zvinofa hazvidzoki.
Magirazi akaputsika uye girazi rinosara
Iguruva nekusingaperi uye richagara riripo!
Kana mabhudzi akadonha kubva kubazi
kaviri mumutsara havazotumbuka ...
Maruva akagurwa nemhepo yakaipa
anomhanya nokusingaperi, nokusingaperi-peri!
Mazuva aive, mazuva akarasika,
mazuva e-inert haachazodzoka!
Zvinosuruvarisa sei maawa akavezwa
pasi pemapiro ekusurukirwa!
Zvinosuwisa sei mimvuri, mimvuri yakaoma,
mimvuri inogadzirwa nehuipi hwedu!
Oo, zvinhu zvaenda, zvinhu zvawoma,
zvinhu zvekudenga zvinoenda seizvi!
Moyo ... nyarara! ... Zvifukidze nemaronda! ...
-kubva pazvironda zvine hutachiona- zvifukidze nehuipi! ...
Dai vese vanosvika vakafa pavanokubata,
moyo wakatukwa kuti unokanganisa kushuva kwangu!
Farai nekusingaperi maswidi angu ese!
Farewell mufaro wangu uzere nokunaka!
Oo, zvinhu zvakafa, zvinhu zvakasvava,
zvinhu zvekudenga zvisingadzokizve! ...
Ini ndinofamba zvishoma nezvishoma munzira yeacacias,
mazaya ayo echando anonhuwirira maoko angu,
vhudzi rangu harigadzike pasi pechiedza zephyr
uye mweya wakaita sefuro remadzishe.
Akanaka shasha: nhasi uno unondikorokotedza,
kungogomera kunondiita wekusingaperi uye mupfupi ...
Ndiri kuenda here kubhururuka sezvo mweya unofamba?
Pamakumbo angu maGrace matatu anotora mapapiro nekutamba.
Ndihwo husiku hwekupedzisira maoko ako, mumaoko angu emoto,
vakapa kutapira kwakanyanya kuropa rangu, zvekuti gare gare,
zadza muromo wangu nemiti inonhuhwirira.
Saka nyowani kuti mumangwanani akachena ezhizha
Ndiri kutya kwazvo kumhanyira kumba kwepurazi
butterflies endarama pamiromo yangu.
Ndinoda iyi yakasviba Gumiguru masikati
famba uchitevedza mhenderekedzo yegungwa iri kure;
kukunda jecha regoridhe, nemvura yakasvibira,
uye makore akachena achandiona ndichipfuura.
Kuve murefu, kudada, kukwana, ndinoda,
nemafungu makuru, uye nematombo akafa
uye nemahombekombe akapamhamha akakomberedza gungwa.
Nenhanho inononoka, uye maziso anotonhora
uye muromo usingatauri, ndichizvirega ndichitorwa;
tarisa mafungu ebhuruu anotsemuka
kurwisana nemapundu uye kwete kubwaira;
ona kuti shiri dzinodya nyama dzinodya sei
hove diki uye usamuke;
kufunga kuti zvikepe zvisina kusimba zvaigona
nyura mumvura usingafemi;
kumuona achiuya kumberi, huro mumhepo,
murume akanaka kwazvo, asingade kuda ...
Kurasikirwa nemeso ako, usipo uchifunga
kurasikirwa nazvo uye usazombozviwana zvakare:
uye, yakamira chimiro, pakati pedenga nemahombekombe,
inzwa kusingaperi kukanganikwa kwegungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Alfonsina Storni, chiratidzo cheArgentina postmodernism. 3 nhetembo
Luciano Zvose akadaro
Munguva yehudiki hwangu, munzira yekuenda kusekondari nebhazi, ndaipfuura mazuva ese pamberi pechinongedzo chaipo pamhenderekedzo yegungwa iyo Alfonsina yaakatsvaga kufa kwake. Memento akafa. Chiratidzo chisingadzimiki chekushomeka kwehupenyu.